အတာကူးမှာ ဖွားတဲ့ သူ ~ White Angel
အတာကူးမှာ ဖွားတဲ့ သူ
1:17 AM အဖြူရောင်နတ်သမီး 14 comments
နှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံးလို့ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ အတာကူးတဲ့ တန်ခူးလသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြန်ပါပြီ...
“တာ” သည် အချိန်အခါ၊ ရာသီဥတု၊ နှစ် စသည်တို့ကို ဟောရာ ဤ“တာကူး” ဟူသော ဝေါဟာရ၌ “နှစ်”ကိုရည်ရွယ်သည်။
ထို့ကြောင့် တာကူးလသည် နှစ်ကူးသောလဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်ဟု ဆိုသည်။
“သင်္ကြန်”ဟူသောစကားသည် သင်္ကန္တဟူသော ပါဠိမှဆင်းသက်၍ ရွတ်ဆိုသောအခါ သက္ကတ၌ရှသော ရရစ်သံဖြင့် ရွတ်ဆိုရသော စကားဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ “ကူးပြောင်းခြင်း” ဖြစ်သည်။
သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့သည် ပျော်ရွှင်စွာ ရေပက်ကစားကြသည်။
သင်္ကြန်ရေပက်ဖျန်းခြင်းသည် လေးနက်မွန်မြတ်သော အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ “ရေ” သည် “မေတ္တာဓာတ်” ကိုတင်စားသည်။ ရေကစားကြသည်မှာ “ရေလိုအေး၍ ပန်းလိုလန်းပါစေ” ဟူသော မေတ္တာဓာတ်ဖြင့် ကစားခြင်းဖြစ်သည်။
လူကြီးများကား သင်္ကြန်နှစ်သစ်ကူးအခါတော်တွင် ကိုယ်၊ နှုတ်၊ နှလုံး သုံးပါးစုံ စင်ကြယ်စေသည်ဟူသော အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် ဦးခေါင်းကို ဆေးကြ လျှော်ကြသည်။
မြန်မာမင်းတို့ လက်ထက်တွင်မူ ဘုရင်မင်းမြတ်တို့ ကိုယ်တိုင် ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာကို ကြီးမှူး၍ ကျင်းပသည်။
ထိုဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာနှင့်စပ်လျှင်း၍ လူငယ်တို့က လူကြီးတို့၏ဦးခေါင်းကို တရော်ကင်ပွန်းတို့ဖြင့် ဆေးလျှော်ပေး၍ ကုသိုလ်ယူကြသည်။
ဤမင်္ဂလာအမှုနှင့် တဆက်တည်း ဂါရဝ နိဝါတ တရားကိုရည်မှန်း၍ လူငယ်တို့က အသက်ကြီး ရွယ်ကြီးတို့ကို ကန်တော့ကြသည်။
သင်္ကြန်သည် တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ကာလရွေ့လျှားပြောင်းလဲလာခြင်းကို သတိရစေသည်။
္က္က္ကဤရွေ့လျှားခြင်းသင်္ခါရဓမ္မကို ဆင်ခြင်သော လူကြီးများသည် ဥပုသ်သီတင်း တည်ဆောက်၍ ဘာဝနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို စီးဖြန်းလေ့ရှိကြသည်။
တရားဓမ္မ၌ ဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်သော လူကြီးများသည် မိမိတို့၏ သားသမီး မြေး မြစ် ငယ်ရွယ်သူတို့ကို ကုသိုလ်တရားပွားများရလေအောင် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း၌ပင် ပဉ္စင်းခံရှင်ပြုအလှူအတန်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်။
တန်ခူးလတွင် ပိတောက်၊ငုဝါ၊ ကံ့ကော်နှင့် ရင်ခတ်ပန်းတို့ပွင့်လန်းကြရာ ပိတောက်ပန်းကို သင်္ကြန်ပန်းဟုသတ်မှတ်ပြီး သင်္ကြန်သီချင်းများနှင့် လှပသော ကဗျာများရေးစပ်ရာတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြသည်။
ပိတောက်သည် အခိုင်လိုက် အဆုပ်အခဲနှင့်ပွင့်လေ့ရှိသောကြောင့် အပွင့်ပွင့်လျှင် တစ်ပင်လုံးရွှေရောင်ကဲ့သို့ ဝင်းထိန်၍နေသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးကို မွှေးပျံ့သင်းကြိုင်သော ရွှေဝါရောင်ပိတောက်ပန်းများဖြင့်လွှမ်းခြုံထားသော ကာလ...
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ တရားဓမ္မကိုဆင်ခြင်ရင်း ဥပုသ်သီလဆောက်တည်သောကာလ...
ဤကဲ့သို့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ မြင့်မြတ်လှသည့် အချိန်ကာလတွင် မွေးဖွားခဲ့သော “ကိုဇော်”ရဲ့ (၁၀.၀၄.၂၀၁၁)တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ပွဲလေးကို အမှတ်တရ ကျင်းပပေးရင်း မဟာဂီတ ဦးပြုံးချိုရေးသားခဲ့သော “တန်ခူးလဖွဲ့ လေးချိုး” ကဗျာလေးကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးရင်း “ကိုဇော်” ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲလိုက်ကြရအောင်လားရှင်.......
HAPPY BIRTHDAY.....“ KO ZAW ”
ရင်ထဲက ခံစားချက်ရောင်စုံများကို စာဖတ်ချစ်သူများအတွက် အမြဲတန်းချပြတတ်တဲ့ ကိုဇော့်အတွက် ရောင်စုံအလံလေးတွေသီကုံးထားတဲ့ မွေးနေ့ကဒ်ဖြူဖြူလေးကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးရင်း...
ကိုဇော်တစ်ယောက်.. ရေလိုအေး၍ ပန်းလိုလန်းပါစေ...
အများအတွက် ပညာပေးရာ ကလောင်ရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ...
လူမျိုး ဘာသာ သာသနာကို သယ်ပိုးတဲ့ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ...
ကိုဇော့်ရင်ထဲက လိုအင်ဆန္ဒများလည်း အမြန်ဆုံးပြည့်ဝပြီး ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ကို အမြန်ဆုံးရောက်ရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်......
သင်္ကြန်အကြို... ကိုဇော့်ကို ရေပုံးနဲ့လောင်းတယ်ကွာ...
မှတ်ချက်။ ။ ဆရာမောင်ထင်ရေးသော မြန်မာတစ်ဆယ့်နှစ်လရာသီ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ ၆နာရီကွာတဲ့အတွက် ပို့စ်ကို ၉ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်။
ကိုဇော့်ဆီ မွေးနေ့ပွဲသွားတာ ဘာမှ မကျွေးလို့ ဒီမှာ လာစားသောက်ပါတယ်။း)))
အခုလို ကျကျနနပြင်ဆင်ကျွေးတဲ့အတွက် တုံးဖလားအလည်ခေါ်ဦးမယ်။ ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အိပ်ရာလိပ်တော့ ကိုယ်ယူခဲ့နော်။း)))
မွေးနေ့ဧည့်ခံကျွေးသူရော မွေးနေ့ရှင်ရော လိုအင်တွေ ပြည့်ပြီး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
ဘာမှလာမပြောနဲ့ ကဇော် ဘယ်မလဲ နှစ်ကူးမှာ မိန်းမယူလိုက်ပြီးဆို သတင်းတွေကြားနေတယ် ကဇော်း)))
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွင်နိင်ပါစေ ကိုဇော်ရေ . . . ဘက်ပီးဟက်ဒေးးးးးး)
Happy Birthday Ko Zaw , နတ်သမီးလို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတာ ကောင်းလိုက်တာနော်...
selamat hari ulang tahun ..း))
လင်းခေတ်ဒီနို ပြောတာ ဟုတ်လားဗျို့ ..??
ညာနဲ့နော် .. :D
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ကိုဇော်က ဘာမှကျွေးလို့ ဒီမှာပဲ လာစားလိုက်တော့တယ်မမရေ .... :D
ံပျော်ရွင် ဖွယ်မွေးနေ့ မင်္ဂလာ ရက်မြတ်လေး ဖြစ်ပါစေ အကိုရေ..Happy Birthday for u!
Happy Birthday ပါကိုဇော်ရေ မွေးနေ့ မှာ
အပေါ်ဆုံးမှာ ကိုကိုမောင် ပြောသွားတာ အမှန်ပဲ။ နတ်သမီးက ကျင်းပပေးမယ် ဆိုလို့ ကျနော့် ဘလော့မှာ ဘာမှကို မကျွေးဘဲ ၊ ဘာရေးရမှန်းတောင်မှ မသိဖြစ်နေခဲ့တာ။ တစ်ညလုံး နတ်သမီး ဆိုက်မှာ ရောက်နေပြီးတော့ ရီဖလက် လုပ်ကြည့်နေခဲ့တာ။ နောက်မှ စဉ်းစားမိတာလေးနဲ့ ပြန်သတိရသွားတာလေးကြောင့် ဟိုပို့စ်လေး တင်ဖြစ်လိုက်တာ။
အပြင်မှာ ချိန်းထားတာတွေကလည်း များနေလို့ မွေးနေ့ရှင်က စောစောလာနော် ဆိုလို့ ရီဖလက် လုပ်နေတာ သွားခါနီး ၉ နာရီ အထိပဲ။ နောက်ဆုံး မတွေ့မှ လက်လျော့ပြီး သွားလိုက်တာ။ ပြန်ရောက်တော့လည်း မိုး တော်တော် ချုပ်မှ ဖြစ်နေပြန်ရော။ ဒါကြောင့် ခဏနားပြီး ရောက်ရောက်ချင်း လာပြီး ပျော်ရွှင်စွာ စားသောက်ကာ လက်ဆောင်ကဒ်လေး ယူသွားပါတယ်။
မွေးနေ့မှာ အရက် ၊ ဘီယာ ၊ ယမကာ မပါတဲ့ အတွက် ပို၍ ပို၍ ကျေးဇူး တင်သွားပါတယ်။ မွေးနေ့ ကိတ်လေးနဲ့ ကဒ်လေးကိုတော့ အကြိုက်ဆုံး . . . .
အခုလို ကျင်းပပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
အားလုံးလည်းပဲ အတူတူ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
အီး . . .အခုမှ အပေါ်က ဗညား ရေးသွားတာ နဲ့ ဆောင်းနှင်းရွက် ရေးတာ တွေ့တော့တယ်။
ဟိုသတင်းက ဂျပ်စတင်း ဘီဘား နဲ့ အတူတူ ထွက်လာတဲ့ April Fool ပါ ဟဲဟဲ . .
ရရင် ကြွားမှာ မပူနဲ့ ၊ ကြွားချင်လွန်းလို့ . .
မွေးနေ့မှာ အရက် ၊ ဘီယာ ၊ ယမကာ မပါတဲ့ အတွက် ပို၍ ပို၍ ကျေးဇူး တင်သွားပါတယ်။ :)
မွေးနေ့ ရှင်တော့ မသိဘူး ဘေးက အလည်လာတဲ့သူတော့ စားခြင်တာတွေ တော်တော် များများ တွေ့ လိုက်ရ၏။
အီးးး ဗိုက်လဲ တော်တော်ပြည့်သွားပြီ...ကျေးဇူး
အားလုံး ကျေးဇူး . . . .
ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ မွေးတွေနေ့ပွဲအတွက် ကျေးဇူးပါဘဲ။ စာချင်နေတာနော်။ သရေယိုနေတယ်။ ကိုဇော်ကတော့ ကျွေးမှာမဟုတ်ဘူးသိတယ်။ ခုမှအားလို့ ပြန်လာလည်နောက်ကျတာ ဆောရီးပါနော်။